सुपुष्पालाई लिड अभिनेत्रीमा कसले अफर गर्ला ? - Sutra TV Sutra TV
सुपुष्पालाई लिड अभिनेत्रीमा कसले अफर गर्ला ?
अभिनेत्री सुपुष्पा भट्टले अभिनय गरेका ३ वटा फिल्म चर्चामा रहे । रणवीरमा उनको काम मान्छेले मन पराएका हुन् । छ माया छपक्कै र चपली हाइट ३ प्रदर्शनमा आएका छैनन् । सबै फिल्ममा उनी लिड अभिनेत्री होइनन् । उनको साथमा कोही न कोही अर्का चलेका अभिनेत्री छिन् ।
रणवीरमा पनि उनी लिड अभिनेत्री थिइनन् । छ माया छपक्कैमा केकी अधिकारी लिड अभिनेत्री छिन् । चपली हाइट ३ मा स्वस्तिमा खड्का । सुपुष्पालाई भने कथा वस्तु राम्रो भएको फिल्मको अफर लिडमा नआएको रहेछ । उनलाई २ हिरोइन भएको फिल्ममा अफर आउँछ, जसको कथा राम्रो छ ।
तर, उनले राम्रो कथामा लिड भूमिकामा अफर नै नआएको बताइन् । लिड हिरोइनमा अफर आएका केही फिल्म त उनले छाडिन् । सुपुष्पालाई राम्रो कथामा मुख्य हिरोइन हुने गरि अफर कसले गर्ला खै ? संभावना बोकेकी यी हिरोइन सह हिरोइनको रुपमा मात्र नखुम्चिउन् । हामीले भन्ने यत्ती न हो ।